Dinam-pifanarahana: ny mpifidy no hitsara ireo tsy manao sonia | NewsMada
Dinam-pifanarahana: ny mpifidy no hitsara ireo tsy manao sonia
Misy ny fanahiana korontana mialoha na mandritra na aorian’ny fifidianana? Amin’izany, misy ny famolavolana Dinam-pifanarahana ho an’ireo kandidà. Hotsarain’ny mpifidy izay tsy manao sonia izany.
“Tsy hifanerena ny fanaovan-tsonia fa ny mpifidy no hitsara izay manao izany na tsia”, hoy ny avy amin’ny Komity iombonana ho amin’ny Dinam-pifanarahana ho an’ireo kandidà hisian’ny fitoniana sy fandriampahalemana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana, Ramarosaona Faraniaina.
Nampahafantarina teny amin’ny foiben’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), Ampefiloha, omaly, ny fijoroan’ny Komity iombonana ho amin’ny Dina, hanandratra sy hanara-maso ny fampiharana ny Dina ara-pitsipi-pitondrantena sy fahitsiana ho an’ireo mpirotsaka hofidina, ho fitoniana amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Nifarimbonana ny famolavolana ny Dina
Mifarimbona tamin’ny fandrafetana ny Dina ny avy amin’ny andry sy rafi-panjakana: ny CFM, ny Ceni, ny CNIDH, ny HCDDED, ny CSI, ny Bianco, ny Samifin. Eo koa ny avy amin’ny firaisamonina sivily: ny tetikasa Fandio, ny ONG Tolotsoa, ny Transparency Interanational-IM, ny Justice et paix, ny hetsika Rohy.
Resy lahatra izy ireo fa tokony hanaja ireo foto-kevitra iorenan’ny fifidianana demokratika ireo mpisehatra politika, indrindra ireo kandidà. Ao anatin’izany ny fahitsiana, ny tsy fitanilana, ny fanajana ny lalàna sy ny zo ary ny fahalalana. Tsy hisy ny krizy vaovao raha vonona hanaja ny zotram-pifidianana izy ireo, tsy hanao izay hisian’ny korontana na hampikatso.
Hatolotra ireo kandidà sy ireo antoko ny Dina hahazoan’izy ireo manatsara sy manao fankatoavana izany. Lanonana manetriketrika ny fanekena sy ny fanaovan-tsonia ny Dina. Hanara-maso ny fampiharana sy ny fanajana azy ny Komity. Amin’ny alalan’ny vaovao marim-pototra no hanaovana izany, hampahafantarina ny daholobe.
Fahendrena ho an’ireo kandidà ny manao sonia
“Heverinay ato amin’ny Komity fa fahendrena lehibe ho an’ny kandidà ny manao sonia io Dinam-pifanarahana io satria tombontsoa ho an’ny firenena”, hoy ny filohan’ny CFM, i Maka Alphonse. Raha olom-pirenena mirotsaka ho filohan’ny Repoblika, anisan’ny takina aminy voalohany ny fanajana lalàna.
Tsy misy, angamba, olom-pirenena na iray aza eto Madagasikara maniry ny hisian’ny korontana. Raha heverina fa olom-pirenena mirotsa-kofidina, manana ny maha izy azy: tsy tombontsoany ny hisian’izany korontana izany. Ny fitoniana sy ny fandriampahalemana no kendrena voalohany amin’ny Dina.